Chiedza Iron inowedzera mhinduro dzekushandira pamwe | NAB Ratidza Nhau | 2021 NAB Ratidza Media Partner uye Mugadziri weNAB Ratidza LIVE. Broadcast Injiniya Nhau
musha » Featured » Chiedza Iron inowedzera mhinduro dzekubatana kure
Chiedza Iron inowedzera mhinduro dzekubatana kure
Post-kugadzirwa masevhisi mupi anoramba achigonesa kugona pasina kurerutsa, achizivisa yakazara, inochinjika kure masevhisi uye akakosha kuwedzerwa kuchikwata chehutungamiriri.
Kubva kuvambwa kwayo muna2009, Chiedza Iron, kambani yePanavision, yakazvipira kufungidzira post-yekugadzira mafashama. Kuzvipira uku kune hunyanzvi kwakaita kuti kambani igadzirire zvakasarudzika kusangana nezvinetso zvenguva ino, mairi indasitiri yemifananidzo-yekumanikidza iri kumanikidzwa kutarisisa mashandiro ayo, kubva mukugadzirira nepashure. Sezvo zvigadzirwa zvichiwedzera kutsvaga nzira dzekuita kuti mafiriflow ave kure, Chiedza Iron yapindura neakawanda ezvigadziriso zvemadhiilies, kunze kwekunyora, DI, uye kupedzisa izvo zvinowedzera zvisarudzo zvevatengi zvekugadzira chero kwavanenge vachishanda, kunyangwe sekambani iri-munzvimbo yezvipo. vatangazve.
Ichisimudzira rutsigiro rweChiedza Iron pazvirongwa zvitsva izvi, kambani yakagamuchira vatungamiriri vatatu vane mukurumbira kuchikwata chavo chevakuru chehutungamiriri. Seth Hallen, Phil Harrelson, naLaura Borowsky vanozobatsira kukura zvigadzirwa zvekambani, kuwedzera mabasa ayo ekupa rubatsiro, uye kutsigira matarenda emumba vachiri kuenderera mberi nekudyidzana, hunyanzvi, uye nimble mhepo inozivikanwa neChiedza Iron.
Kana kugadzirwa kukamiswa kutanga kwegore rino mukutarisana nekuvharirwa kwepasirese kurwisa kupararira kwe COVID-19, mapurojekiti atove mumashure aifanira kuchinjika pane nhunzi kuti itore mafiriflow avo ari kure. "Kubva pakutanga, rave riri basa redu kuLight Iron kutungamira vatengi vedu kuburikidza nekugadzira zvigadzirwa zvinogara zvichichinja matekinoroji uye kufambiswa kwemabasa kuitira kuti vakwanise kutarisa mukutaura nyaya dzavo vasingakanganisi," akadaro Peter Cioni, director-co director weLight Iron. "Tave nenguva takambundira maturusi eruzhinji uye kubatana kure, takakwanisa kushandura maartist edu nevatengi kubva panzvimbo, tichiunza ruzivo rwedu mudzimba chaimo vasina kupotsa mubhadharo."
Chiedza Iron aive piyona wekutanga wemafoni dailies anofambisa, uye kambani iri kuenderera mberi nekugadzira neAptpost Remote Control (RC), chizvarwa chazvino cheAptpost padyo-seti dailies mhinduro, iyo ikozvino inobvumidza Chiedza Iron dailies colorist kudzora iyo yakazara system. ari kure, zvisinei nenzvimbo nzvimbo. Iyo Outpost RC system inogona kukurumidza kuendeswa muhofisi yekugadzira, nzvimbo yedata, kana chero kupi kuri nyore kugadzirwa, ichipa ese mabhenefiti eiyo chaiyo-nguva padhuze-set mhinduro pasina kuda kuti muvaravara avepo panyama paseti. Izvi zvinobvumidza iyo yekugadzira kuchengetedza yavo ye-saiti vashandi nhamba pasi - iyo inoramba iri yekutanga panguva yeCOVID-19 - nepo panguva imwe chete ichipa vatambi vema cinematographer mukana wekubatana nechero dailies colorist pane Chiedza Iron's rosta, zvisinei nenzvimbo yemuvara.
Chiedza Iron yakawedzerawo yayo yekushambadzira yekushandurwa mhinduro kuunza iwo wekutanga ruzivo weiyo New York nzvimbo-mune-zvivakwa zvinopihwa zvakananga kune vatengi, ichivashongedzera neiyo yakazara imba yekumisikidza iyo yakachengetedzwa zvakabatana zvakadzoserwa kumashure kuChiedza Iron's main infrastructure. Chiedza Iron's chena-girovhosi kuendesa inopa zvese izvo mutengi achada, kubva kune fenicha kuenda kune Hardware - kusanganisira iyo SDI chivimbo chekutarisa - ine yakazara, nhanho-nhanho rutsigiro kuti iite system uye iite. Imwe yambomiswa, mutengi system inosangana uye uye kuverenga kubva kune yakachengeteka Avid Nexis server inogara paChiedza Iron, iine mukana kune imwecheteyo yakavimbika zvivakwa, rutsigiro, uye nekugovana ruzivo rwekuchengetedza ivo rwavanogona kunakidzwa kana vachishanda munzvimbo iyi. Chiedza Iron chiri kure zvekushambadzira zvekushambadzira zviri kuendeswa parizvino munzvimbo yeNew York City, pamwe nekukwiridzirwa kwedunhu kuwedzera kutanga kwegore ra2021.
Yezve DI uye yekupedzisa, Chiedza Iron inopa dzakasiyana siyana dzinoenderana (rarama) uye asynchronous ongororo mhinduro kusangana nezvinodiwa nevatengi. Zvirongwa izvo Light Iron ichangopedza neiri kure yekufashukira kwemabasa anosanganisira akateedzana Zvatinoita Mumimvuri, Inotevera, Iyo Mambokadzi Gambit, Iyo Inotambudza yeBly Manor, uye Yemagariro Kurutivi, uye maficha One Night MuMiami, Dzungaira Nerima, uye Chii icho Bumbiro Rinoreva Kwandiri.
Pamusoro pezvo, kubva mukupera kwaJune, Chiedza Iron yave zvakare ichitambira vatengi mumunhu. Iyo kambani yakazvipira kupa yakachengeteka, inochinjika, uye inoshanda ruzivo, uye yakaisa nyowani yekuchengetedza zvibvumirano zvevatengi vanoshanda mu-nzvimbo, kusanganisira yakazara yekuchenesa zvirongwa, yakagadziridzwa chikafu-sevhisi maitiro, uye yakaoma nzvimbo yekugara uye kwakakodzera kurekesa. Iyi yazvino marongero nemaitiro pamwe neruzivo rwechimanjemanje-enzvimbo kune ese enzvimbo dzeChiedza Iron anowanikwa kuLight Iron's COVID-19 hub hub, www.akademi.com/covid.
Kutsigira kuwedzera kwayo kwemasevhisi, Chiedza Iron yakasimbisa timu yayo yehutungamiriri nemabasa achangobva kubhadharwa aSeth Hallen, Phil Harrelson, naLaura Borowsky.
Seth Hallen ajoina Chiedza Iron semubati-maneja director, achiunza hunyanzvi hwakawanda mukugadzira uye kutumira kuchikwata, pamwe nemakumi emakore ehuzhinji hwehutungamiriri uye hwakasiyana hukama hweindasitiri. Iine kumashure senge bhizinesi unit muridzi mukati Sony, muzvinabhizimusi, uye CEO, Hallen parizvino anoshanda seMutungamiri we Hollywood Professional Association (HPA), iro basa raakabata kubvira 2016.
"Kuona kukura kweChiedza Iron mumakore gumi apfuura kwave kushamisa," akadaro Hallen. “Kubva pakutanga, kambani iyi yainge ichitarisa kuti kugadzirwa kweposvo kunoitwa sei ichikura mukurumbira wayo mutsika yemhuri inotarisana nevatengi. Aya matsva mafambiro ekushambadzira anopa vatengi kunyatso kuchinjika pasina kupira chero avo ekuona kwavo. Ndakagara ndichiyemura tarenda rekugadzira mukugadzirwa kweposvo, uye ndinofara kushanda pamwe neveChiedza Iron maartist, avo vakazvipira zvakasarudzika kukumbundira shanduko. filmmaking matekinoroji uye kupayona mhinduro nyowani dzekuendesa mashiripiti pachiratidziri. ”
Phil Harrelson - VP yeKushanda
SaLight Iron's VP yeKushanda, Phil Harrelson anozotarisira manejimendi mashandiro ekambani, aine tarisiro yekushandisa masisitimu nemaitiro ekubatsira zvirinani kushandira vatengi. Harrelson ane makore anopfuura makumi maviri 'chiitiko mune yekumashure-kugadzirwa
indasitiri kuyambuka VFX, dailies, kugadzirwa, uye kutengesa, kusanganisira makore matanhatu achishanda kuDeluxe. Anounza neakasarudzika akasarudzika seti yehunyanzvi iyo yaakagadzira sevatengi vese - achinge ashandira kweanopfuura makore gumi semutariri weposvo uye mugadziri weposvo yezvikamu uye maficha - uye mutengesi.
Laura Borowsky - Director weBusiness Development
Nyowani Director weBusiness Development Laura Borowsky anounza ruzivo rwake rwakakura rwakaunganidzwa pamusoro pemakore gumi neshanu achishanda mumatende matope, maindia, uye kushambadzira kuwedzera timu yeLight Iron's Bhizinesi Rekuvandudza, iro rinotungamirwa naKatie Fellion. Borowsky akatanga basa rake neTechnicolor, uye kuburikidza nebasa rake akavandudza hukama hwakasimba nevatengi ve studio pamwe neakasika vanosanganisira ma cinematographer nevatungamiriri, vachigadzira kubatana kwakasimba nePanavision. Kubva mu Los Angeles, Borowsky anobva kuAtlanta, uye rake nyowani basa rinosanganisira rinotarisa mukuvandudza musouth-East musika.
"Tashandisa nguva yakawanda tichiona kuti tine timu yepamusoro yekutsigira zvese zvinodiwa nevatengi vedu, uye danho rekutora iri rinoratidza danho rinotevera mukuedza uku," akadaro Cioni. “Seth, Phil, naLaura vanounza huwandu hwakawanda hwezviitiko zveindasitiri. "Imwe neimwe ichawedzera ruzivo rwekugadzira rwatinogona kupa vatengi vedu uye kutiisa munzvimbo yakanaka yekuenderera mberi tichiongorora kosi yedu kuburikidza nekupfuura kukanganiswa kunokonzerwa neCOVID-19."
"Kunyangwe paine matambudziko akakosha akaunzwa mumwedzi ichangopfuura, tine tarisiro nezveramangwana reindasitiri yedu uye nehunyanzvi hwedu hwekutsigira vatengi vedu," Cioni akawedzera. "Sezvo posvo uye kugadzirwa kuri kuramba kuchichinja, Chiedza cheChiedza chinotarisa kwachiri kugara, pakupa kugona kwevatengi vedu. Tiri kugara tichigadzira nzira nyowani dzekushanda kuzadzikisa zvido zvavo, uye tinogara tiri pano kuvabatsira kuti vawane - kana kugadzira - mhinduro yakanakisa yemamwe mapurojekiti. Nekuwedzera uku mumasevhisi edu uye vashandi, vatengi vedu vanogona kutora mukana wekuwedzera kuchinjika kupfuura nakare kese uye kunakirwa isina musono mushure mekugadzirwa kwechiitiko inova nechokwadi chekuti vanozoona kwavo kuona kubva kuseti kuenda kuchiratidziro, zvisinei kuti vasarudza kupi kana sei . ”
About Light Light
Chiedza Iron, kambani yePanavision, inozivikanwa zvakanyanya semutungamiriri wezve tekinoroji uye shamwari yehunyanzvi mukugadzira-kumagumo kugadzirwa uye post mhinduro. Vagadziri vemafirimu, masitudiyo, vagadziri uye tekinoroji vanovimba nehunyanzvi hweChiedza Iron kuendesa inofambira mberi yedhijitari mafashama, kubva kumadhiri uye manejimendi yedata kune ekupedzisira mavara uye midhiya yekuchengetedza mabasa. Nenzvimbo dzekurenda pasina nzvimbo uye zvivakwa kuNorth America zvine masimba ari kure, Chiedza Iron inonyanya kuve nimble kushandira zvakasarudzika zvido zvemufirimu uye episodic mapurojekiti.
Previous: Vizrt Boka rinoshandira Daniel Url kusimbisa vatengi kutarisisa muChigadzirwa Chigadzirwa
Zvadaro: Art Loft Inopinda Yayo Yechipfumbamwe Mwaka PaSouth Florida PBS!